खाँचो स्वस्थ दाँत–मुखको
असोज १, २०६९ | डा. रविन्द्रमान श्रेष्ठ
एक कुशल शिक्षकको कुरा गर्दा उसमा निहित अथाह ज्ञान र सीप, स्वस्थ एवं तन्दुरुस्त शरीर, स्पष्ट र मीठो बोली अनि सुन्दर मुस्कानको परिकल्पना गरिन्छ । एउटा शिक्षकले आफ्नो ज्ञान, स्वास्थ्य र व्यक्तित्वका तीन आयामलाई सधैं नै चुस्तदुरुस्त राख्नु जरुरी हुन्छ । शारीरिक–मान सिक दृष्टिले तन्दुरुस्त र स्फुर्तिला शिक्षक नै विद्यार्थीका लागि अनुकरणीय आदर्श व्यक्तित्व हुन सक्छन् ।
मानिसको शरीरमा दाँत–मुख पोषण र पाचन प्रणालीका प्रमुख अंग हुन् । त्यस्तै स्पष्ट बोली, आकर्षक व्यक्तित्व र सौन्दर्यको लागि मिलेका दाँत त्यत्तिकै आवश्यक छन् ।
कुनै पनि अग्र पंक्तिका प्रतिस्पर्धी पेशाकर्मी जस्तै शिक्षकले पनि आफ्नो दाँत–मुखको स्वास्थ्यमा उचित ध्यान पुर्याउनुपर्दछ । दाँत फुक्लेको,गिजा पाकेको, दाँतमा कालै दाग बसेको, बाङ्गो–टिङ्गो वा दाँत उछिट्टिएको, सासगन्हाएको र बोल्दा थुक छल्किने किसिमका शिक्षक देखि विद्यार्थी मात्रै होइन, अभिभावक र सहकर्मीहरू समेत टाढा रहन खोज्छन् । त्यस्ता शिक्षकले आफ्नै स्वास्थ्य र व्यक्तित्वबाट हीनताबोध गरिरहेका हुन्छन्; फलस्वरुप जीवनमै असफल साबित हुन्छन् ।
नेपालको परिवेशमा शिक्षकको दाँत–मुख स्वास्थ्यको अवस्था बारे अध्ययन गर्ने अभिप्रायले ‘शिक्षक मासिक’ र ‘डेन्टल स्क्वाएर क्लिनिक’ को संयुक्त प्रयासमा यही भदौको तेस्रो साता काठमाडौंमा दाँत–मुख स्वास्थ्य सम्बन्धी एक शिविर आयोजना गरिएको थियो । सो शिविरमा उपत्यकाका विभिन्न सामुदायिक विद्यालयका २७ देखि ५८ वर्ष उमेरका शिक्षकहरूको दन्त परीक्षण तथा सर्वेक्षण गरिएको थियो । त्यसरी परीक्षण गर्दा दाँत–मुख सम्बन्धी निम्न समस्याहरू मुख्य रूपमा फेला परेः
१. दाँत कीराले खाने रोग (dental caries)
२. गिजाका रोग (periodontal disease)
३. दाँत फुक्लिएको (missing tooth)
दाँत कीराले खाने रोग संसारमा सबैभन्दा व्याप्त रोग हो भने चेतनाको कमिले दाँत राम्ररी सफा न गर्दाग्रामीण समुदायमागिजा सम्बन्धी समस्या व्यापक मात्रामा छ । यी दुवै रोगका कारणले जनमान समा दाँत फुक्लिने समस्या विकराल छ । सो शिविरमा आएका शिक्षकहरूमा गरिएको मापनबाट ५५ प्रतिशतमा दाँत कीराले खाने रोग, ७० प्रतिशतमागिजाको रोग तथा २७ प्रतिशतमा कम्तीमा एउटा दाँत फुक्लेको समस्या पाइएको थियो ।
सहभागी शिक्षकहरूमध्ये २८ प्रतिशतले यसअघि कहिल्यै पनि दन्त परीक्षण गराए का थिएनन् भने ८ प्रतिशतले मात्र नियमित दन्त जाँच गराउने गरेका छन् । त्यस्तै ६२ प्रतिशतले दाँत दुखेको अनुभव गरिसकेका छन् भने १५ प्रतिशतलाई निरन्तर दाँत दुख्ने समस्या देखि एको छ । त्यस्तै ४२ प्रतिशत शिक्षकहरू आफ्नो सासगन्हाउने कुरा स्वीकार्छन् भने ८ प्रतिशतलाई आफ्नो मुखको दुर्गन्धबारे थाहै छैन ।
सर्वेक्षणले शिक्षकहरूमा दाँत–मुख सफा राख्ने तरीका सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान भने रहेको पाइयो । सर्वेक्षणमा सहभागी अधिकांश शिक्षकले धुम्रपान तथा मद्यपान गर्ने न गरेको बताए । उनीहरूमध्ये ६५ प्रतिशले दैनिक दुईपटक र ३५ प्रतिशतले एकपटक दाँत माझने गरेको पाएँ । त्यस्तै ९० प्रतिशत शिक्षकहरूले साधारण टुथपेष्टको तुलनामा बढी प्रभावकारी मानिने फ्लोराइडयुक्त टुथपेष्ट प्रयोग गर्ने गरेको बताए ।
दन्त परीक्षणको क्रममा सहभागी शिक्षकहरूलाई दाँत कीराले खाएको खाल्डोमा समयमै सिमेन्ट भर्नाले दाँत दुख्न र दाँत जीर्ण भई उखेल्नुपर्ने समस्याबाट बच्न सकिन्छ भन्ने कुरा को जानकारीगराइयो ।गुलियो लगायतका टासिने खानेकुरा बढी सेवन गरे मा दाँतको कापमा अड्केर बसेमा जीवाणुले दाँतलाई क्षय गर्छ र दाँतमा खाल्डो पार्छ, यसैलाई नै दाँत कीराले खाने रोग (dental casies) भनिन्छ भनी व्याख्या गरिएको थियो ।
दाँत फोहोर भई दाँतलाई टेवा दिनेगिजा, बन्धनी र हाडको संक्रमण भएको अवस्थालाई periodontitis भनिन्छ । दाँतको सतहबाट गिजा छुट्टिनु,गिजा अपसरण हुनु,गिजा रातो हुनु,गिजाबाट रगत आउनु, दाँत हल्लिनु र दाँत दुख्नु यसका लक्षण हुन् । सो कार्यक्रममा सहभागी शिक्षकहरूलाई दाँत माझने सही तरीका पनि सिकाइएको थियो । दाँत रगिजा स्वस्थ राख्न राम्ररी ब्रस गर्नु पर्दछ र नियमित जाँच गराई आवश्यकता अनुसार दाँतको सफाई गराउनु पर्दछ भनी जानकारीगराइएको थियो । त्यस्तै कतिपय सहभागीहरूमा कुनै कारणले दाँत फुक्लिसकेको अवस्थामा आवश्यकता अनुसार कृत्रिम दाँत लगाउने सुझाव दिइयो । दाँत नभएको अवस्थामा खाना चपाउन अप्ठ्यारो पर्दछ, जसले पोषण एवं सम्पूर्ण स्वास्थ्यमा नै असर पुर्याउँछ भने सौन्दर्यमा पनि प्रतिकूल असर पार्दछ भनी चित्रण गरिएको थियो ।
स्वस्थ शिक्षकहरू आफैंमा फूर्तिला, आत्मविश्वासी र सफल हुन्छन् । यस्ता शिक्षकले नै आफ्ना विद्यार्थीलाई स्वस्थ, असल र सफल पार्न मार्गदर्शन दिन सक्छन् । तसर्थ स्वस्थ शिक्षक मात्र शिक्षाका साथै स्वास्थ्यका वास्तविक संवाहक बन्न सक्छन् ।
(वरिष्ठ दन्त रोग विशेषज्ञ डा. श्रेष्ठ कान्तिपुर डेन्टल कलेजका भाइस प्रिन्सिपल हुन् ।)